Indlela yokusebenzisa nemithi kangakanani "Febrofid" (gel)? Yokusetshenziswa, intengo izidakamizwa wathi izokwethulwa ngezansi.
Kulesi sihloko uzofunda ngalokho izingxenye ayingxenye kwezidakamizwa okubonisa, wamiswa, ithinta indlela umuntu nokuthi analogs.
Incazelo, ukwakheka kanye nokupakisha
Kuyini enjalo umenzeli zangaphandle, njengoba "Febrofid" (gel)? Yokusetshenziswa, nesineke impendulo yombiko ukuthi lokhu 2.5% kuyinto ekwakhiweni kungekho nto enemibala emihle, esobala noma kancane opalescent (ungase ube nombala ophuzi ukukhanya), okuhlanganisa usawoti lysine ka ketoprofen.
Futhi isakhiwo se-nomuthi kubhekwe kuhlanganisa izingxenye ezengeziwe ngesimo polyethylene glycol, propyl hydroxybenzoate, triethanolamine, methyl hydroxybenzoate bese likhishwa carbomer amanzi.
Pharmacodynamics kwezimali zangaphandle
Iziphi izici kwemithi esingokwemvelo nomuthi "Febrofid"? Gel umyalelo ku isicelo okuyinto linamathele iphakheji eyenziwe amakhadibhodi, eyisidalwa esinenkululeko zendawo, okuqondene iqembu NSAID.
Lesi sidakamizwa has a strong eqeda ukuvuvukala, analgesic kanye isinyathelo antiexudative. Field kwesicelo zomuthi - izindawo ezibuhlungu of the system zemisipha (ezibuhlungu amalunga, imisipha, nemisipha nemisipha).
Liphinde kubhekwe umuthi ngenkuthalo isicelo izilonda emithanjeni, imigudu ye-lymph, izindlala zamanzi kanye isikhumba.
Ngemva kwesicelo se-ijeli is kakhulu ziyancipha ubuhlungu bamalunga, ukuvuvukala iqedwe ekuseni ukuqina.
Yiziphi izici izidakamizwa kinetic "Febrofid" (gel)? Yokusetshenziswa lithi ketoprofen (isithako esebenzayo yokulungiselela) has a amandla okuhle eyenza umuntu acabange eseZwini. Ngemuva kokufaka isicelo gel isikhumba isithako yayo asebenzayo kunalokho ngokushesha zilethwe izigaxana eziyinkinga, ngalokho lunikeze a analgesic wendawo nomphumela eqeda ukuvuvukala.
I bioavailability zomuthi ivuliwe ezingeni 5%. Ukuxhumana-plasma amaprotheni 99%. Kulokhu, ekuqongeleleni emzimbeni is hhayi waphawula.
Ketoprofen umzimba esibindini.
Cishe 10% of the izidakamizwa e ifomu unmodified futhi 80% ngesimo metabolites excreted ngu nezinso.
Lapho ukusebenzisa izidakamizwa "Febrofid" (ukhilimu)? Yokusetshenziswa libhekisela uhlu elandelayo kwezimiso sokugembula:
hhayi ukulimala eziyinkimbinkimbi noma ukuhlukumezeka (kufaka phakathi ukulimala ezemidlalo, umsipha futhi umsipha izinyembezi, Ukwenyela, ubuhlungu ukucindezeleka kwangemva kwenhlekelele syndromes, dislocations);
izimo ezibuhlungu of the system zemisipha, okuyizinto ukuvuvukala futhi esiwohlozayo (kuhlanganise samathambo, tendinitis, bursitis, synovitis, lumbago);
semithambo pathologies ukuvuvukala (Phlebitis, periphlebitis), lymph kanye izindlala zamanzi (isib lymphangitis eligcizelela ukubukeka kwangaphandle, lymphadenitis) - e therapy eziyinkimbinkimbi.
Kufanele futhi ukuthi le izidakamizwa ngokuvamile esetshenziswa ekwelashweni siyefana myalgia, neuralgia, ubuhlungu yomgogodla, nokunye. D.
Uma ungeke ukwazi ukusebenzisa imithi "Febrofid" (gel)? Yokusetshenziswa usitshela ukuthi lokhu izidakamizwa kungavunyelwe ukhombe:
imihuzuko elinegciwane, amanxeba kanye ukusha;
sokukhulelwa (ikakhulukazi yokuthathu yesithathu);
hypersensitivity kuya isakhi esiyinhloko kanye nezinye izingxenye ijeli, futhi amalungiselelo okungokwendlela iqembu NSAID.
Yokusetshenziswa zomuthi "Febrofid"
Gel "Febrofid" kuphela okumele zisetshenziswe ongaphandle.
Ukuze kuzuzwe umphumela esiphezulu ekwelapheni, inani elincane izidakamizwa (ukuhlubula 3-5 cm) kufanele sisetshenziswe esikhumbeni, okuyinto phezu ndawo obonakele. Ngemva kwalokhu imithi edingekayo ukuba uwuhlikihle nokukhanya massage ukunyakaza.
Nqwabelanisa kusaladi ezomile emva inqubo ayidingekile. Lokhu kungenxa yokuthi i-izidakamizwa kubhekwe amuncwa umzimba kahle, akubandakanyi udayi, ayinakho nephunga futhi engashiyi amabala okunamathelayo nanamafutha izingubo.
Ngezinye izikhathi isizinda "Febrofid" izidakamizwa isiguli sine-ukubonakaliswa engakhi imvelo nomzimba. Lezi zihlanganisa ukusabela ezifana isikhumba ububomvu, photosensitivity, purpura futhi ukuqubuka kwesikhumba.
Ngekusetjentiswa njalo futhi eside ukulungiswa "Febrofid" ungakheka okunhlobonhlobo nokuxhumana neminye imithi.
Kubhekwe indlela okwandisa okuqukethwe "Verapamil" futhi "Nifedipine" egazini.
Nge inhlanganisela "Febrofida" nge anticoagulants temlomo, "cefamandole" antiplatelet "ceftazidime" thrombolytics futhi heparin kwandisa ingozi ebangela ukopha.
ukusetshenziswa ngesikhathi esisodwa ijeli nge corticosteroids, corticotropin, nezinye ama-NSAID futhi ethanol kwandisa ingozi ukwakheka izilonda kanye ukopha ipheshana wokugaya ukudla.
Co-nokuphathwa izidakamizwa nge-insulini namanxusa temlomo hypoglycemic hypoglycemic kwandisa nokusebenza kahle yabo.
Ketoprofen elilulaza isinyathelo hypotensive nezidakamizwa isisu ngenxa okusithiyayo of prostaglandin zamagama.
Lapho kuhlangene sodium valproate kungaba baphazamiseke wokuhlanganisa platelet.
izincomo Specific ukusetshenziswa kwezimali zangaphandle
Yini odinga ukukwazi ngaphambi kokusebenzisa izidakamizwa "Febrofid" (gel)? Yokusetshenziswa ibika ukuthi nomuthi asebenzayo ayikwazi isetshenziswa izingxenye zesikhumba suppuration ezithandwa noma umonakalo lokukhanda. Kufanele uthathe zonke izinyathelo ukuvimbela contact gel ngamehlo.
Uma kunesidingo, sebenzisa wamafutha in iziguli ezinzima izinso noma isibindi kwezinso, ikakhulukazi isikhathi eside, kudingeka bahlale uqaphele impilo yakhe.
Phezu ukuthola ukuqubuka kwesikhumba Kufanele uyeke ukwelashwa kanye nodokotela.
Izindleko "Febrofid" isidakamizwa imayelana 250 ruble angu-30 g Buyisela lesi imithi kungaba ngokusebenzisa izinto ezinjengenkolo "nimulid", "diclofenac", "Ketoprofen", "Phenylbutazone", "Bystrumgel" "Indomethacin", "Artrozilen", " Ortophenum "," Finalgel "et al.
Manje unombono mayelana nendlela ukusebenzisa izidakamizwa "Febrofid" (gel). Yokusetshenziswa, intengo, ukubuyekezwa ngalokhu thuluzi ezichazwe kulesi sihloko.
Iziguli eziningi aphendule nomuthi kubhekwe kuphela ohlangothini oluhle. Bathi izidakamizwa esikhundleni ngokushesha nangempumelelo aqede ubuhlungu futhi aqede ukuvuvukala nokuvuvukala endaweni elimele.
Iziguli futhi wazi ukuthi it is ngokushesha ngempela ugxile emva isicelo se-ijeli, ngaphandle dirtying izingubo futhi kusale izindawo okunamathelayo.
Ngokuqondene imibono engakhi, ziyivelakancane kakhulu. Njengomthetho, ubufakazi yakamuva okuvela ziyabagulisa iziguli.
Izinkomba Zokusetshenziswa "Indapamide" - nomfutho wegazi ophezulu
"Kviks" Izingane ukubuyekezwa. "Kviks": yokusetshenziswa, intengo
Izidakamizwa "Fosprenil" ngoba amakati nezinja